IRetreat yaseMantla -- Tub eshushu, iSauna, iNkundla yeTennis - I-Airbnb
IRetreat yaseMantla -- Tub eshushu, iSauna, iNkundla yeTennis
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguChad
IClubhouse inee-2 bd/2 ba ezinekhitshi eligcweleyo, igumbi lokuhlala kunye nedesika. Yabelana nge-4-acre eninzi eyenziwe ngamaplanga ene-1 bd/1 ba cabin (eqeshiweyo ngokwahlukeneyo) kunye nenkundla yentenetya, i-sauna yangaphandle & nebhafu eshushu, ukolula/igumbi lokuzilolonga, kunye nendlela yokuhamba. Enye ibhedi ilingana nokumkani, enye iyahlutha. Kwaye kukho i-futon kwigumbi lokuhlala. Indlu enegumbi elinye (iibhanka ezi-3) ekhoyo ukuba ungayirenta, nayo. Downtown Nisswa & Paul Bunyan Trail nje 1 imayile kude. INJA YOBUHLOBO! Indlu icocwa ngokobuchule phakathi kwayo yonke indawo ebekelwe yona.
Le yindawo ekhethekileyo esiyibiza ngokuba yiClubhouse -- wonke umgangatho omnye (akukho zinyuko!) kwaye ilungile kwiintsapho ezinabantwana okanye izilwanyana zasekhaya (imali eyi-$75 yesilwanyana sasekhaya), abahambi beshishini, okanye ukubaleka ngempelaveki nabahlobo.
I-tub eshushu kunye ne-sauna kumgangatho ovela ngasemva, kwaye inkundla entsha ye-tennis yagqitywa ehlobo lika-2018 (zonke ezo zikwabelwana ngazo naziphi na iindwendwe kwenye i-cabin).
Kumaqela amakhulu, sinokhetho ezimbini:
1). "IKhabhinethi encinci" kwipropathi iyafumaneka ukurenta, ngokunjalo, ehlala malunga neenyawo ezili-100 ukusuka kwiClubhouse. Yikhabhathi egcweleyo ene-1 bd/1ba, ikhitshi, igumbi lokuhlala kunye neveranda kwaye iyafumaneka kwindawo eyahlukileyo ngokuthunyelwa kwe-Airbnb phantsi kwe-"Cozy Cabin" kwaNisswa.
2). I "Bunk House" kwipropati sisithuba sexesha ezintathu, isakhiwo esinegumbi elinye (malunga ne-12'x14') esineebhanka ezintathu. Inombane webhodi / ukushisa, kodwa akukho mibhobho yamanzi, kwaye iya kufumaneka ngexesha leNtwasahlobo, iHlobo kunye neKuwa (ngokusisiseko ngo-Aprili ukuya ku-Oktobha, kuxhomekeke kwimozulu). Akukho ludwe lwakwa-Airbnb olwahlukileyo koku, ke ukuba unomdla, nceda undithumelele umyalezo.
4.93 · Izimvo eziyi-165
Indawo yethu ikwindawo yaseRoy Lake Heights eRoy Lake. Kukho amakhaya amangalisayo unyaka wonke, kunye neekhabhinethi zamaxesha onyaka...kwaye sesinye sezitrato ezikufutshane nedolophu yaseNisswa (engaphantsi kwemayile) ekuGull Lake chain. IDolophu yaseNisswa ineevenkile ezizodwa kunye neendawo zokuzonwabisa zokutya (ezifana neRaffertys, A&W, Ye Olde Pickel Factory, iBig Ax micro-brewery, ikofu yeAdirondack nezinye). Iiyure zasebusika kwiindawo ezininzi zincitshiswe kancinci, kodwa iiyure zasehlotyeni zivuleleke kakhulu. Ukuthenga ukutya kugqwesileyo kwi-Schafer's (malunga ne-5-7 min drive) okanye ungaya kwi-Super Valu e-Pequot Lakes (malunga ne-7-8 ngomzuzu wokuqhuba). Ezinye iindawo ezintle zokutya okanye ukutyelela kwindawo eyimizuzu emi-5 ukuya kweli-15 njengeGrandview Lodge, iPines Golf Course, iZorbaz, iBar Harbour Supper Club, iLost Lake Lodge, iSherwood Forest kunye neqela labanye. IiCraguns, iMaddens kunye nezinye iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide kwi-Gull Lake enamachibi, intenetya, igalufa, njl.njl. malunga nemizuzu engama-20 yokuqhuba kwintshona / kumazantsi onxweme lweGull Lake.
Umkhumbi wepropathi yam uPete uya kufumaneka kuyo nayiphi na imeko kaxakeka (ukufudumala/ukupholisa kungasebenzi, umntu othandabuzayo lugcino, njl. njl.). Ngaphaya koko, mhlawumbi uTata wam okanye mna siya kufumaneka ukuze sincede ngentetho okanye ngetekisi ngalo lonke ixesha lokuhlala.
Umkhumbi wepropathi yam uPete uya kufumaneka kuyo nayiphi na imeko kaxakeka (ukufudumala/ukupholisa kungasebenzi, umntu othandabuzayo lugcino, njl. njl.). Ngaphaya koko, mhlawumbi…